वरिष्ठ समाजसेवी इशा गुरुङको सहयोगमा बुलन्द परिवारले दुर्लुङका पहिरो पिडितलाई गर्यो राहत वितरण (भिडियोसहित) ,,हेरी शेयर गर्नुहोस् ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
वरिष्ठ समाजसेवी इशा गुरुङको सहयोगमा बुलन्द परिवारले दुर्लुङका पहिरो पिडितलाई गर्यो राहत वितरण (भिडियोसहित) ,,हेरी शेयर गर्नुहोस् !
पर्वत कुस्मा २०७७ । कुस्मा नगरपालिका वडा नंबर ३ दुर्लुङमा गत जेठ ३१ गते गएको पहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई राहत बितरण गरिएको छ । बेलायतमा बस्ने ब’रिष्ठ समाजसेवी इशा गुरुङले पठाएको रा’हत सामग्री र रकम रामबाबु सेवानले मृ’तकका परिवारलाई दुर्लुङमै गएर बितरण गरेका थिए ।
समाजसेवी इशा गुरुङले यस अघी पनि नेपालका बिभिन्न ठाउंमा अप्ठ्यारो परेका ब्यक्तिलाई सहयोग गर्दै आइरहेकी छिन । पर्वतको कारुणिक घटनाको बारेमा सामाजिक सन्जालबाट थाहा पा’एपछी आंफुले पनि केहि सहयोग गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो ।
दुर्लुङका पहिरोमा परी मृ’तक भएका ९ जना मध्य एकदमै समस्यामा परेका ३ जना परिवारलाई प्रती परिवार नगद रु १० हजार र ३ बोरा चामल बि’तरण गरिएको गुरुंङले बताइन।
वरिष्ठ समाजसेवी इशा गुरुङले गरेको सहयोग वितरणमा बुलन्द परिवारले धेरै नै ठूलो टेवा पुर्याएको छ । गुरुङले बेलायतबाट पठाएको सहयोग बुलन्द परिवार पीडितहरुको घर गएर नै सहयोग वितरण गरि पिडितहरुको मुहारमा हाँसो छरिदिएका छन् । ।
समाजसेवी गुरुङले आफ्नो मुलुकमा भएका अ’नेकौं विकासका कर्याहरु लगायत विभिन्न दुख,पीडा र समस्यामा रहेका पिडितहरुलाई आँफ्नो तर्फबाट व्यक्तिगत सहयोग र विभिन्न अभियानहरु चलाई सहयोग गर्दै आएकी छिन् ।
गुरुङको हरेक सामाजिक कार्यहरु उहाँको सं’न्जालमा प्रष्टसँग नै अवलोकन गर्नसकिन्छ । अनेकौं पिडितहरु भन्छन् ,” इशा गुरुङ हाम्रो लागि शाश्वत भगवान् सावित हुनुहुन्छ”! पक्कै पनि उहाँको सत्कर्महरु प्रशंसनीय छन।
गुरुङ थप्छिन, यसैगरी सबैजनाले पीडितलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्छु, हामी नेपाली एकदमै मनकारी छौं यस्तो बेलामा मलाई थाहा छ धेरै सहयोगदाताहरु अगाडी आउनु हुनेछ ।
कुस्मा नगरपालिका वडा नंबर ३ दुर्लुंगमा गत जेठ ३१ गते राती ठुलो पहिरो जांदा दुई घर पुरिदा ९ जनाको मृ’त्यु भएको थियो । पी’डित परिवारलाई राह’त आउने क्रम जारी रहेको छ ।
बरिस्ठ समाजसेवी इशा गुरुङ ज्यु लगायत अन्य सम्पुर्ण सहयोगी मनहरुलाई मेचीमहाकाली.नेट परिवार नमन तथा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ ।
भिडियो हेर्नको लागि :
Previous “MCC सम्झौता मैले गरेको हुँ”, यो देशको हितमा छ’: पुर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ,,हेर्नुहोस!
Next म एकदमै अ’सुरक्षित महसुस गरिरहेको छु, म के गरुँ भन्नुस् त ? -सरिता गिरी ,,हेर्नुहोस!